Dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed
Dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed
November 15, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Gudiga joogtada ah ee baarlamaanka Koonfur galbeed ayaa go’aamiyay xiliga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha maamulkaasi kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Baydhabo.
Gudiga ayaa kulankooda ku shaaciyay in dib loo dhigo doorashada Koonfur galbeed xili horey loo qorsheeyay in doorashadu ay dhacdo 17-ka bishan taasoo jahwereer badan abuurtay.
Doorashada ayay u qorsheyeen in ay dhacdo 28 bishan November ka horna la guda galo dhameystirka xubnaha ka dhiman gudigii qaban qaabin lahaa doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed kuwaasoo badankood horey iskaga tagay shaqadii gudiga.
Si gaar ah gudiga ayaa u iclaamiyay in 17-November oo ah wakhtigii horey loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada lasoo dhamaystiro xubnaha gudiga doorashada intaa kadibna la diiwaan geliyo musharixiinta lagana uruuriyo araajida u sahlaya in ay ka qeyb galayaan doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed.
Tan iyo markii maamulka Koonfur galbeed uu galay xaalada kala guurka ah waxaa hareeyay culeyso siyaasadeed kaasoo ugu dambeyn sababay in uu iscasilo madaxweynihii maamulkaas Shariif Xasan Sh Aadan kana mid ahaa musharixiinta u tarmaya doorshada wallow markii dambe uu ka tanaasulay ka qeybgalka doorashada.
Wasiirkii Maaliyada Kenya oo Loo Xiray Musuqmaasuq
Khayre oo Dhuusamareeb Kula Kulmay Safiirada Caalamka ee Fadhigoodu yahay Muqdisho
Tababar Loo furay Ciidamadii dhawaan loo qarameeyay Galmudug
Wasiirka Deegaanka Puntland oo booqday Beeraha Laacdheere iyo Rabaable.